“အျောဂဲနဈ စိုကျပြိုးရေးမှာ အပငျတှေ ပိုးမကအြောငျ ကာကှယျနိုငျသော သဘာဝပိုးသတျဆေးမြား” - Barnyar Barnyar
ကနြျောမနကေ့ တငျခဲ့တဲ့ တိုငျထောငျပဲသီးတှေ တလှကွေီးသီးနတေဲ့အခငျးကို အပငျငယျငယျက ဆေးရှကျကွီး + ငွုတျသီး + အရကျ ရောထားတဲ့ ပိုးသတျဆေးတကွိမျသာ ဖွနျးလိုကျရပါတယျ။ အခုပွထားတဲ့ ကနျ့လနျဆိုငျ ဟငျးရှကျခငျးမှာလညျး ငယျစဉျက အပငျ ၂ ပငျ ၃ ပငျလောကျ ပိုးစကစြဉျမှာ အဲဒီ အျောဂဲနဈဆေးရညျဘဲ တကွိမျဖနျြးဖူးပါတယျ။
အခုသှားကွညျ့တော့ သနျလိုကျတဲ့ အရှကျတှေ၊ ပိုးကတြာလညျး တပငျမှ မတှရေ့ပါ။ ဖရနျ့ တယောကျက ဆေးဖျေါနညျးကို ပိုဈ့တခု သပျသပျ တငျပေးပါဆိုလို့ အောကျမှာ ဖျေါပွပေးလိုကျပါတယျ။
အပငျ၊ တိရစ်ဆာနျနှငျ့ တှငျးထှကျပစ်စညျးမြားမှရရှိသော သဘာဝဆေးမြားဖွငျ့ အပငျရောဂါနှငျ့ ပိုးမှား မြားကို ကာကှယျနိုငျပါသညျ။ ပိုးမြားကို တိုကျရိုကျသတျခွငျးထကျ ၎င်းငျးတို့၏ ဖကျြစီးနိုငျစှမျးကို လြှော့ကစြခွေငျးဖွဈသညျ။ ဖကျြပိုး၏ ဇီဝကမ်မပွောငျးလဲမှုကို ပကျြပွားစခွေငျးဖွငျ့ ဖကျြပိုးဦးရကေို လြှော့ခစြနေိုငျသညျ။
ပိုးမြိုးစုံကို ကာကှယျနိုငျသညျ။ မိတျဆှပေိုးမြားကို မထိခိုကျပါ။ သီးနှံမြားအပျေါ အဆိပျဓါတျကွှငျးမြား မကနျြပါ။ ပတျဝနျးကငျြအဆိပျသငျ့မှု မရှိပါ။ သီးနှံပငျမြားကို မထိခိုကျပါ။ သီးနှံပငျကွီးထှားမှုကို အထောကျအကူပွုသညျ။ ပိုးဖကျြစီးမှုသကျသာ၍ သီးနှံအထှကျ ပိုရနိုငျသညျ။ သုံးစှဲရလှယျကူ၍ ကုနျကစြရိတျသကျသာသညျ။
“လိုအပျသောပစ်စညျးမြား” : ၁။ ငရုတျသီး (စို/ခွောကျ) – ၃၀ ကပျြသား ၂။ အရကျဦးရညျ – ၂ လီတာ ၃။ ရေ – ၄ လီတာ
“ပွုလုပျပုံ” : ငရုတျသီးမြားကို ရေ (၄) လီတာဖွငျ့ရောကာ မီးအေးအေးဖွငျ့ (၁) နာရီကွာ ပွုတျပါ။ ပွုတျပွီးသား ငရုတျသီးအရညျကို ရေ (၂၀) လီတာ ထညျ့ထားသောအိုးတှငျ ထညျ့ပါ။ ထို့နောကျ အရကျဦးရညျကို (၂) လီတာကို ရောထညျ့ပါ။ မှပေေးပါ။ အဝတျပါးပါးဖွငျ့ ဖုံးအုပျပေးပွီး အေးမွခွောကျသှသေ့ညျ့ အရိပျအောကျတှငျ ထားရှိပါ။
တဈနတေ့ဈကွိမျ မှပေေးပါ။ (၇)ရကျ ပွညျ့ပွီးနောကျ အနညျအနှဈမြားကို စဈထုတျပွီး အရညျကိုသာသုံးပါ။ (၃)လခနျ့ သိုလှောငျနိုငျသညျ။
ဆေးဖနျြးရနျနှုနျးထား : : ဆေးရညျ (၁)ဆနှငျ့ ရေ (၅၀၀)ဆ
ကာကှယျနိုငျသော ဖကျြပိုးမြား : : မှား၊ ပြ၊ လှေး၊ ပုရှကျဆိတျ၊ ယငျဖွူ၊ ကြိုငျး၊ ပငျစညျထိုးပိုး၊ ဖလံကောငျအဆငျ့၊ ခရု
2. ” ဆေးရှကျကွီး ပိုးသတျဆေးရညျ “
“လိုအပျသောပစ်စညျးမြား” : ဆေးရှကျကွီး – ၂၈ ကပျြသား။ ရေ – ၄ ဂါလံ။ ဆပျပွာ – ၂ ကပျြသား
“ပွုလုပျပုံ” : ရေ (၄)ဂါလံကို မွအေိုးဖွငျ့ တညျပါ။ ၎င်းငျးထဲသို့ ဆေးရှကျ ရှကျကွီး (၂၈)ကပျြသားထညျ့၍ ကြိုပါ။ ပါးပါးလှီးထားသညျ့ ဆပျပွာ(၂) ကပျြသားကို ထပျမံထညျ့၍ ကြိုခကျြပါ။ ဆပျပွာပြျောဝငျပွီးခြိနျတှငျ အအေးခံ၍ ပိတျပါးစဖွငျ့စဈပါ။ ဓါတုဆေးနှငျ့ ခြှတျဆေးမြားပါဝငျသညျ့ ဆပျပွာမှုနျ့မြား သုံးစှဲပါက အပငျကို လောငျကြှမျးစနေိုငျသညျ။
ဆေးဖနျြးရနျနှုနျးထား : : ဆေးရညျ (၁)ဆ နှငျ့ ရေ(၂)ဆ
ကာကှယျနိုငျသော ဖကျြပိုးမြား : : ပြ၊ ခူ၊ လှေး၊ မှား၊ ကြိုငျး၊ စုပျစားပိုး၊ ပငျစညျ/ ရှကျထှငျး/ အစထေို့းပိုး
3. ” တမာပိုးသတျဆေးရညျ “
“လိုအပျသောပစ်စညျးမြား” : လတျဆတျသော တမာစေ့/ အရှကျခွောကျ – ၅၀ ကပျြသား။ ရေ – ၂ ဂါလံ
“ပွုလုပျပုံ” : လတျဆတျသော တမာစေ့/ အရှကျခွောကျ (၅၀)ကပျြသားကို လကျဖွငျ့ အဆံကှဲရုံ (သို့) နုတျနုတျ စငျးကာ ရေ(၂)ဂါလံဖွငျ့ ရောမှပွေီး (၁)ရကျခနျ့အကွာ ရစေိမျထားပါ။ ပိတျပါးစဖွငျ့ စဈပွီး အသုံးပွုနိုငျသညျ။ အရကျ (သို့) ဝါးရှာလကာရညျဖွငျ့စိမျပွီး ရရေောဖနျြးက ပိုထိရောကျပါသညျ။
ဆေးဖနျြးရနျနှုနျးထား : : တမာရညျ နို့ဆီဗူး (၁) ဗူးလြှငျ ရေ (၄) ဂါလံ
ကာကှယျနိုငျသော ဖကျြပိုးမြား : : မှားပငျ့ကူနီ၊ ပိုးလောကျကောငျမြား၊ ပြ၊ ခူ၊ ပုရှကျဆိတျ၊ လှေး၊ မှား၊ ကြိုငျး၊ ပငျစညျ/ ရှကျထှငျး/ အစထေို့းပိုး
4. ” ဒုတ်တာမှိုသတျဆေး “
“(၄) ဂါလံ ဆေးဖနျြးပုံးအတှကျ လိုအပျသောပစ်စညျးမြား” : ၁။ ဒုတ်တာ – ၁၀ ကပျြသား ၂။ မဖောကျထုံး – ၁၀ ပိဿာ ၃။ ရေ – ၁၀ ပိဿာ
“သတိပွုရနျ” : မဖောကျထုံးကို ဖောကျပွီး ခကျြခွငျး သုံးစှဲရမညျ။ လမေသလပျစရေပါ။ အလှယျတကူ အနညျထိုငျစသေဖွငျ့ မကွာခဏမှပေေးပါ။ ဖြျောစပျပွီး (၂၄) နာရီအတှငျး သုံးစှဲရနျ။ မွေ၊ စဉျ့၊ ကွှေ၊ ပလပျစတဈ၊ သဈသားစညျပိုငျး၊ အိုးခှကျ၊ ပုံးမြားသာ အသုံးပွုရနျ။ ဆေးဖနျြးပုံးကို အသုံးပွုပွီးပါက ပွောငျစငျအောငျဆေးပါ။ မိုးရှာစဉျ၊ အလှနျပူပွငျးခွောကျသှလှေ့နျးခြိနျ၊ အပငျရငေတျ၍ အားနညျးညှိုးနှမျးခြိနျမြားတှငျ မပကျ ဖနျြးသငျ့ပါ။
ကာကှယျနိုငျသော ရောဂါမြား : : စပါးဂုတျကြိုး၊ စပါးရှကျပွောကျရောဂါ၊ မွပေဲရှကျပွောကျရောဂါ၊ ပဲမြိုးစုံမှဲ့ပွောကျစှနျးရောဂါ။
5. ” ကွကျသှနျဖွူ ပိုးသတျဆေး “
“လိုအပျသောပစ်စညျးမြား” : ၁။ ကွကျသှနျဖွူ – ၆၀ ကပျြသား ၂။ ဗီနီဂါ(ရှာလကာရညျ) – ၅၀၀ စီစီ ၃။ အရကျဦးရညျ – ၂ လီတာ
“ပွုလုပျပုံ” : ကွကျသှနျဖွူမြားကို ကွညေကျအောငျ ထောငျးပါ။ (၁၅)လီတာဝငျဆနျ့သောအိုးတှငျ ထောငျးထားသော ကွကျသှနျဖွူ၊ ဗီနီဂါ၊ အရကျ၊ ရေ(၁၀)လီတာ တို့ကို ထညျ့၍မှပေါ။ အဝတျပါးပါးဖွငျ့ အိုးကိုဖုံးအုပျပေးပွီး အေးမွသောနရောတှငျ ထားပါ။ တဈနေ့ တဈကွိမျ မှပေေးပါ။ (၇)ရကျ ပွညျ့လြှငျ အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ အသုံးပွုနခြေိနျတှငျ အဖတျမြားကို ရစေဈဖွငျ့ စဈပွီးမှ အသုံးပွုပါ။ (၃)ပတျခနျ့ သိုလှောငျနိုငျသညျ။
ဆေးဖနျြးရနျ နှုနျးထား : : ဆေးရညျ(၁)ဆ နှငျ့ ရေ(၅၀၀)ဆ
ကာကှယျနိုငျသော ဖကျြပိုးမြား : : ပိုးလောကျကောငျမြား၊ ပြ၊ ခူ၊ ပုရှကျဆိတျ၊ လှေး၊ မှား၊ ကြိုငျး၊ ပငျစညျ/ ရှကျထှငျး/ အစထေို့းပိုး
#Credit to U Ye Tun
“အော်ဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေးမှာ အပင်တွေ ပိုးမကျအောင် ကာကွယ်နိုင်သော သဘာဝပိုးသတ်ဆေးများ”
ကျနော်မနေ့က တင်ခဲ့တဲ့ တိုင်ထောင်ပဲသီးတွေ တလှေကြီးသီးနေတဲ့အခင်းကို အပင်ငယ်ငယ်က ဆေးရွက်ကြီး + ငြုတ်သီး + အရက် ရောထားတဲ့ ပိုးသတ်ဆေးတကြိမ်သာ ဖြန်းလိုက်ရပါတယ်။ အခုပြထားတဲ့ ကန့်လန်ဆိုင် ဟင်းရွက်ခင်းမှာလည်း ငယ်စဉ်က အပင် ၂ ပင် ၃ ပင်လောက် ပိုးစကျစဉ်မှာ အဲဒီ အော်ဂဲနစ်ဆေးရည်ဘဲ တကြိမ်ဖျန်းဖူးပါတယ်။
အခုသွားကြည့်တော့ သန်လိုက်တဲ့ အရွက်တွေ၊ ပိုးကျတာလည်း တပင်မှ မတွေ့ရပါ။ ဖရန့် တယောက်က ဆေးဖေါ်နည်းကို ပိုစ့်တခု သပ်သပ် တင်ပေးပါဆိုလို့ အောက်မှာ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အပင်၊ တိရစ္ဆာန်နှင့် တွင်းထွက်ပစ္စည်းများမှရရှိသော သဘာဝဆေးများဖြင့် အပင်ရောဂါနှင့် ပိုးမွှား များကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ပိုးများကို တိုက်ရိုက်သတ်ခြင်းထက် ၎င်းတို့၏ ဖျက်စီးနိုင်စွမ်းကို လျှော့ကျစေခြင်းဖြစ်သည်။ ဖျက်ပိုး၏ ဇီဝကမ္မပြောင်းလဲမှုကို ပျက်ပြားစေခြင်းဖြင့် ဖျက်ပိုးဦးရေကို လျှော့ချစေနိုင်သည်။
ပိုးမျိုးစုံကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ မိတ်ဆွေပိုးများကို မထိခိုက်ပါ။ သီးနှံများအပေါ် အဆိပ်ဓါတ်ကြွင်းများ မကျန်ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်အဆိပ်သင့်မှု မရှိပါ။ သီးနှံပင်များကို မထိခိုက်ပါ။ သီးနှံပင်ကြီးထွားမှုကို အထောက်အကူပြုသည်။ ပိုးဖျက်စီးမှုသက်သာ၍ သီးနှံအထွက် ပိုရနိုင်သည်။ သုံးစွဲရလွယ်ကူ၍ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။
“လိုအပ်သောပစ္စည်းများ” : ၁။ ငရုတ်သီး (စို/ခြောက်) – ၃၀ ကျပ်သား ၂။ အရက်ဦးရည် – ၂ လီတာ ၃။ ရေ – ၄ လီတာ
“ပြုလုပ်ပုံ” : ငရုတ်သီးများကို ရေ (၄) လီတာဖြင့်ရောကာ မီးအေးအေးဖြင့် (၁) နာရီကြာ ပြုတ်ပါ။ ပြုတ်ပြီးသား ငရုတ်သီးအရည်ကို ရေ (၂၀) လီတာ ထည့်ထားသောအိုးတွင် ထည့်ပါ။ ထို့နောက် အရက်ဦးရည်ကို (၂) လီတာကို ရောထည့်ပါ။ မွှေပေးပါ။ အဝတ်ပါးပါးဖြင့် ဖုံးအုပ်ပေးပြီး အေးမြခြောက်သွေ့သည့် အရိပ်အောက်တွင် ထားရှိပါ။
တစ်နေ့တစ်ကြိမ် မွှေပေးပါ။ (၇)ရက် ပြည့်ပြီးနောက် အနည်အနှစ်များကို စစ်ထုတ်ပြီး အရည်ကိုသာသုံးပါ။ (၃)လခန့် သိုလှောင်နိုင်သည်။
ဆေးဖျန်းရန်နှုန်းထား : : ဆေးရည် (၁)ဆနှင့် ရေ (၅၀၀)ဆ
ကာကွယ်နိုင်သော ဖျက်ပိုးများ : : မွှား၊ ပျ၊ လှေး၊ ပုရွက်ဆိတ်၊ ယင်ဖြူ၊ ကျိုင်း၊ ပင်စည်ထိုးပိုး၊ ဖလံကောင်အဆင့်၊ ခရု
2. ” ဆေးရွက်ကြီး ပိုးသတ်ဆေးရည် “
“လိုအပ်သောပစ္စည်းများ” : ဆေးရွက်ကြီး – ၂၈ ကျပ်သား။ ရေ – ၄ ဂါလံ။ ဆပ်ပြာ – ၂ ကျပ်သား
“ပြုလုပ်ပုံ” : ရေ (၄)ဂါလံကို မြေအိုးဖြင့် တည်ပါ။ ၎င်းထဲသို့ ဆေးရွက် ရွက်ကြီး (၂၈)ကျပ်သားထည့်၍ ကျိုပါ။ ပါးပါးလှီးထားသည့် ဆပ်ပြာ(၂) ကျပ်သားကို ထပ်မံထည့်၍ ကျိုချက်ပါ။ ဆပ်ပြာပျော်ဝင်ပြီးချိန်တွင် အအေးခံ၍ ပိတ်ပါးစဖြင့်စစ်ပါ။ ဓါတုဆေးနှင့် ချွတ်ဆေးများပါဝင်သည့် ဆပ်ပြာမှုန့်များ သုံးစွဲပါက အပင်ကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။
ဆေးဖျန်းရန်နှုန်းထား : : ဆေးရည် (၁)ဆ နှင့် ရေ(၂)ဆ
ကာကွယ်နိုင်သော ဖျက်ပိုးများ : : ပျ၊ ခူ၊ လှေး၊ မွှား၊ ကျိုင်း၊ စုပ်စားပိုး၊ ပင်စည်/ ရွက်ထွင်း/ အစေ့ထိုးပိုး
3. ” တမာပိုးသတ်ဆေးရည် “
“လိုအပ်သောပစ္စည်းများ” : လတ်ဆတ်သော တမာစေ့/ အရွက်ခြောက် – ၅၀ ကျပ်သား။ ရေ – ၂ ဂါလံ
“ပြုလုပ်ပုံ” : လတ်ဆတ်သော တမာစေ့/ အရွက်ခြောက် (၅၀)ကျပ်သားကို လက်ဖြင့် အဆံကွဲရုံ (သို့) နုတ်နုတ် စင်းကာ ရေ(၂)ဂါလံဖြင့် ရောမွှေပြီး (၁)ရက်ခန့်အကြာ ရေစိမ်ထားပါ။ ပိတ်ပါးစဖြင့် စစ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သည်။ အရက် (သို့) ဝါးရှာလကာရည်ဖြင့်စိမ်ပြီး ရေရောဖျန်းက ပိုထိရောက်ပါသည်။
ဆေးဖျန်းရန်နှုန်းထား : : တမာရည် နို့ဆီဗူး (၁) ဗူးလျှင် ရေ (၄) ဂါလံ
ကာကွယ်နိုင်သော ဖျက်ပိုးများ : : မွှားပင့်ကူနီ၊ ပိုးလောက်ကောင်များ၊ ပျ၊ ခူ၊ ပုရွက်ဆိတ်၊ လှေး၊ မွှား၊ ကျိုင်း၊ ပင်စည်/ ရွက်ထွင်း/ အစေ့ထိုးပိုး
4. ” ဒုတ္တာမှိုသတ်ဆေး “
“(၄) ဂါလံ ဆေးဖျန်းပုံးအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများ” : ၁။ ဒုတ္တာ – ၁၀ ကျပ်သား ၂။ မဖောက်ထုံး – ၁၀ ပိဿာ ၃။ ရေ – ၁၀ ပိဿာ
“သတိပြုရန်” : မဖောက်ထုံးကို ဖောက်ပြီး ချက်ခြင်း သုံးစွဲရမည်။ လေမသလပ်စေရပါ။ အလွယ်တကူ အနည်ထိုင်စေသဖြင့် မကြာခဏမွှေပေးပါ။ ဖျော်စပ်ပြီး (၂၄) နာရီအတွင်း သုံးစွဲရန်။ မြေ၊ စဥ့်၊ ကြွေ၊ ပလပ်စတစ်၊ သစ်သားစည်ပိုင်း၊ အိုးခွက်၊ ပုံးများသာ အသုံးပြုရန်။ ဆေးဖျန်းပုံးကို အသုံးပြုပြီးပါက ပြောင်စင်အောင်ဆေးပါ။ မိုးရွာစဉ်၊ အလွန်ပူပြင်းခြောက်သွေ့လွန်းချိန်၊ အပင်ရေငတ်၍ အားနည်းညှိုးနွမ်းချိန်များတွင် မပက် ဖျန်းသင့်ပါ။
ကာကွယ်နိုင်သော ရောဂါများ : : စပါးဂုတ်ကျိုး၊ စပါးရွက်ပြောက်ရောဂါ၊ မြေပဲရွက်ပြောက်ရောဂါ၊ ပဲမျိုးစုံမှဲ့ပြောက်စွန်းရောဂါ။
5. ” ကြက်သွန်ဖြူ ပိုးသတ်ဆေး “
“လိုအပ်သောပစ္စည်းများ” : ၁။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၆၀ ကျပ်သား ၂။ ဗီနီဂါ(ရှာလကာရည်) – ၅၀၀ စီစီ ၃။ အရက်ဦးရည် – ၂ လီတာ
“ပြုလုပ်ပုံ” : ကြက်သွန်ဖြူများကို ကြေညက်အောင် ထောင်းပါ။ (၁၅)လီတာဝင်ဆန့်သောအိုးတွင် ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဗီနီဂါ၊ အရက်၊ ရေ(၁၀)လီတာ တို့ကို ထည့်၍မွှေပါ။ အဝတ်ပါးပါးဖြင့် အိုးကိုဖုံးအုပ်ပေးပြီး အေးမြသောနေရာတွင် ထားပါ။ တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် မွှေပေးပါ။ (၇)ရက် ပြည့်လျှင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုနေချိန်တွင် အဖတ်များကို ရေစစ်ဖြင့် စစ်ပြီးမှ အသုံးပြုပါ။ (၃)ပတ်ခန့် သိုလှောင်နိုင်သည်။
ဆေးဖျန်းရန် နှုန်းထား : : ဆေးရည်(၁)ဆ နှင့် ရေ(၅၀၀)ဆ
ကာကွယ်နိုင်သော ဖျက်ပိုးများ : : ပိုးလောက်ကောင်များ၊ ပျ၊ ခူ၊ ပုရွက်ဆိတ်၊ လှေး၊ မွှား၊ ကျိုင်း၊ ပင်စည်/ ရွက်ထွင်း/ အစေ့ထိုးပိုး